I-China KN95 Ukwakhiwa Kwemaski Yokuphefumula Uthuli Nefekthri |I-VTECH
2.Kufikela ku-95% ukusebenza kahle kokuhlunga, indawo yokuphefumula enezinhlangothi ezintathu ezingu-360-degree, ikuhlinzeka ngokuvikeleka kokunqanda uthuli.
5.Lungisa ijika lesiqeshana sekhala se-aluminium ngeminwe ukuze silingane, singalungiswa ukuze sigweme i-voids futhi sinciphise ukuhogela kwezinto eziyingozi.
Ibhuloho lekhala le-KN95 Lokuvikela elakhelwe ngaphakathiIncazelo:
I-KN95 Protective Mask-Ibhuloho lekhala langaphandle Incazelo:
1. Geza izandla zakho ngaphambi kokugqoka imaskhi, noma gwema ukuthinta izandla zakho ngengaphakathi le-mask ngenkathi ugqoke imaskhi ukuze unciphise amathuba okuthi imaski ingcole.
2. Hlukanisa ingaphakathi, ngaphandle, phezulu nangaphansi kwe-mask ngokucacile.
3. Ungayicindezeli imaskhi ngesandla, imaski ye-KN95 ingahlukanisa kuphela igciwane ebusweni bemaski.Uma ucindezela imaski ngesandla, igciwane lizomanzisa imaski ngamaconsi, okulula ukubangela ukutheleleka ngegciwane.
4. Zama ukwenza imaski nobuso bube nokunamathela okuhle.Indlela elula yokuhlola yile: ngemva kokugqoka imaski, khipha umoya kanzima, futhi umoya awukwazi ukuvuza emaphethelweni e-mask.
5. Imaski yokuvikela kufanele isondelene nobuso bomsebenzisi.Umsebenzisi kufanele aphuce intshebe ukuze aqinisekise ukuthi imaski inganamathela eduze ebusweni.Noma yini phakathi kwentshebe kanye ne-pad seal kanye nobuso kuzobangela ukuthi imaski ivuze.
6. Ngemva kokulungisa indawo ye-mask ngokuvumelana nesimo sobuso bakho, sebenzisa umunwe wokukhomba wezandla zombili ukuze ucindezele isiqeshana sekhala eduze konqenqema olungenhla lwemaski ukuze ulwenze lulingane eduze nobuso.
Okwedlule: I-KN95 Protective Face Mask
Olandelayo: I-White Ear-loop Elahlwayo Yemaski Yobuso Ye-3D Evikelayo
I-Kn95 Respirator Mask
I-Mask Bike Kn95 2.5
Imaski Yomlomo Wobuso Kn95
Imaski ye-Kn95 Engalukiwe
I-3D Soft Breathable PM 2.5 KN95 Mask